တစ်နေ့ကျမကျောင်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က “အင်ပါယာကြီး ပြန်လည်ထွန်းတောက်ချိန်” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ စနေနေ့မှာ ဖိတ်တယ်။ အမေက ရှင့်ကိုပါခေါ်သွားဖို့ပြောတယ်။ ကျမငြင်းတာပေါ့။ ဟုတ်တယ်လေ ကျမသူငယ်ချင်းကမှ ရှင့်ကို မသိဘဲ။ ကျမ သိပ်ခံပြင်းသွားတဲ့ အပြင် သူငယ်ချင်းကိုလည်း ရှင်က ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဘာကြောင့် လာနေရလဲ ဆိုတာတွေ ရှင်းပြမနေချင်ဘူး။
“ဟဲ နင်သူ့ကိုသိတာပဲ” အမေကပြောတယ်။
“ဒါပေမယ့် သူကမှ ကျမကို သဘောမကျတာ”
“သူ ညည်းကို သဘောကျပါတယ်အေ..” အမေကတော့ ကျမကို မျက်စိမှိတ်ပြီး ငြင်းနေတယ် ။
“သူက အရာရာကို ညှိပြီး ပြင်ဆင်နေရရှာတယ်အေ။ ညည်းမှာ ဒီလိုမျိုးမကြုံဖူးတာ”
ဒီမှာတင်ပဲ ပွဲပြီးသွားတယ်။ ရှင်လိုက်လာပေမယ့် ရုပ်ရှင်ကိုတော့ စိတ်ဝင်စားပုံ မပေါ်ပါဘူး။ ဘယ့်နယ့် ရှင်က သည့်အရင် “ကြယ်တာရာ စစ်ပွဲ” ကားတွေကိုမှ မကြည့်ဘူးတာ။
တစ်နေ့တော့ ရှင် ကျမရဲ့ စန္ဒရားနားမှာ ထိုင်ပြီး ခုလုတ်တွေကို လက်ညှိုးနဲ့ လျောက်နှိုပ်နေတာ တွေ့တယ်။ ကျမကိုမြင်တော့ မတ်တပ်ရပ်ပြီး နောက်မှီဆိုဖာပေါ်ကို ပြန်ထိုင်တယ်။
“အကို ဒ်ီမှာနေရတာ မပျော်ဘူးလား”
“ကိုယ် … အိန္ဒိယမှာနေရတာကို ပိုသဘောကျတယ် ”
ကျမစိတ် အထင်တော့ အိန္ဒိက စိတ်ပျက်စရာကြီးပါ။ ညနေဆိုရင် နံရံအပေါ်မှာ တွဲလောင်းကျနေတတ်တဲ့ တောက်တဲ့ကြီးတွေ၊ မှိုတ်တုတ်တုတ်သာ လင်းနေတတ်တဲ့ အောက်လင်းမီးရောင် မှိန်မှိန်တွေ၊ အသက်တစ်ခါရှုတိုင်း သတိထား ကြည့်နေရတဲ့ ပိုးဟပ် အကြီးကြီးတွေ။ ဒါတွေကို ကျမသိပ်မုန်းတယ်။ နောက် ကျမရှေ့မှာတောင် မရှောင်နိုင်ဘဲ ပြောတတ်ကြတဲ့ ဆွေမျိုးတွေရဲ့ အတင်းအဖျင်းတွေ၊ ကျမအပေါ် တင်တဲ့ အပြစ်တွေ။ ကျမက အမေ့လို လက်ချောင်းလေးတွေ မသွယ်ဘူးဆိုတာတွေရော၊ နောက် ငယ်ငယ်တုန်းက အသား သိပ်မည်းတယ်ဆိုတာတွေရော။ မျိုးစုံပဲ ။
“ဘုံဘေဆိုတာ ကာလကတ္တားနဲ့တော့ မတူဘူးလေ” ကျမစိတ်ကို ဖတ်မိဟန်နဲ့ ရှင်ကထပ်ပြောတယ် ။
“ဟင့်အင်း” ရှင်ကတော့ ခုမှ ကျမကို အာရုံထဲမှာ အသိအမှတ်ပြုမိပုံနဲ့ သေချာစိုက်ကြည့်တယ်။
“မင်း မြေပုံ တစ်ခါမှ မကြည့်ဖူးဘူးလား”
ကျမတို့ကုန်တိုက်ရောက်တုန်းက ရှင်က ဓာတ်ပြားတစ်ချပ် ဝယ်လာတယ်။ “အလယ်လွန် ကျောက်တုံးများ” အဖွဲဆိုထားတဲ့ အခွေထင်ပါရဲ့။ အပေါ် အင်္ကျီ အဖြူတွေ ကိုယ်စီဝတ်လို့ နောက် ကိတ်မုန့်လိုဟာကြီးကိုလည်း ကိုင်ထားတဲ့ ကာဗာနဲ့။ ရှင်က ကျမမှာရှိတဲ့ အခွေတွေကိုလည်း စိတ်ဝင်စားပုံမပေါ်ပါဘူး။ “အားဗားအဖွဲ့”၊ “ယွန်းကစ်းစဒီ” ရယ် နောက် ကျမမုန့်ဖိုးနဲ့ ရုပ်သံကြေငြာလိုင်းကမှာ ဝယ်ထားတဲ့ ဒစ်စကို သီချင်းစု အခွေတွေရယ်။ နောက် ရှင်က ကျမအခန်းထဲက ဓာတ်ပြားစက်မှာလည်းဖွင့်ဖို့ စိတ်ကူးဟန်မတူဘူး။ ရှင်ကျမအဖေရဲ့ အော်လံပါတဲ့ ဓာတ်စက်သေတ္တာကို ဖွင့်လိုက်တယ်။ အဖေကသူ့အသံဖမ်းစက်၊ ဓာတ်စက်တွေကို သိပ်ကြီးကို အရေးထားတာ။ ကျမရော အမေရောလုံးဝ မထိရ မကိုင်ရပဲ။ ဒီစက်က အဖေ့ဘဝမှာ တစ်ခုတည်းသော ဇိမ်ခံ အပို ပစ္စည်းပဲ။ စနေနေ့ မနက်တိုင်းလည်း အိန္ဒိယ အဆိုတော်တွေရဲ့ သီချင်းတွေ မဖွင့်ခင်မှာ ကိုယ်တိုင် အဝတ်နဲ့ ကျကျနန နေရာမကျန် သုတ်တတ်သေးတာ။
“ဒါကြီးကို သွားမကိုင်လေနဲ့ အကို”
ရှင် ကျမကို လှည့်ကြည့်တယ်။ ဓာတ်စက် အဖုံးကိုလည်း ဖွင့်ထားပြီး ဓာတ်ပြားကိုလည်းခွင်မှာ တင်ပြီးသား။ ရှင်က ဓာတ်စက်ရဲ့ အပ်သွားကို လက်ချောင်းလေးနဲ့ ပင့်ကိုင်ထားတယ်။
“ကိုယ် ဓာတ်စက်မဖွင့်တတ်ဘူးလို့ မင်းထင်လို့လား” ကိုယ့်လုပ်ရပ်ကို မရွံ့မရဲရှိဟန်မတူဘဲ ရှင်ပြန်မေးတယ်။ ပြီးတော့ ရှင် စက်ရဲ့ အပ်သွားကို ချလိုက်တယ်။
အမေတို့ဟာ ရှင့်မိဘတွေရဲ့ ပုံကြီးချဲ့ စိတ်နေမြင့်မှုကိုတော့ စခိုးစခု ဖြစ်ကြဟန်ပါပဲ။ နောက် သူတို့ကိုယ်ပိုင် ခပ်ရိုးရိုး အိမ်အတွက်လည်း အရှက်ရကြ သလိုပဲ။ “ကျမတို့သည်မှာနေတာ ရှင့်တို့ကိုဒုက္ခ ပေးသလိုဖြစ်နေပြီ” ရှင့်မိဘတွေက သည်လို စကားဟကြပေမယ့် အမေတို့ကလည်း ဘာမှစောဒက မတက်ပါဘူး။ ကျမလည်း အတူတူပါပဲ ဘာမှမပြောပါဘူး။ ညအိပ်ခါနီးကျရင်တော့ အမေက “ကျမ သူတို့ ဒီလောက်အကြာကြီး နေမယ်ရယ်လို့ မထင်ခဲ့မိဘူး” လို့တော့ ညည်းတတ်တယ်။
ဘာလိုလိုနဲ့ ရှင့်တို့ ရောက်နေတာ တစ်လလောက်ရှိတော့မယ်။ ရှင့်တို့ လာနေတော့ ကျမတို့ဆီမှာ အခန်းပို မရှိတော့ဘူးလေ။ “ဒပ်ဂုတတို့က နောက်တစ်ပတ် ရုံးပိတ်ရက်ကြရင် လာချင်တယ်ပေါ့တော့ မလာသေးနဲ့ဦး” လို့ ပိတ်လိုက်ရတယ်။ ရှင့်တိုတတွေ အရင်ကနဲ့မတူ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အကြောင်းကတော့ သူတို့ ခဏခဏ ပြောနေသံကြားရတယ်။ ကျမတို့ မရည်ရွယ်ဘဲ သူစိမ်းတွေကို လက်ခံထားရသလိုပဲတဲ့။ ရှင့်အမေက အိမ်အလုပ်တွေ လုံးဝ ဝင်မကူပဲ နေစိမ့်တဲ့အကြောင်း၊ ညစာ စားပြီးတောင်ဘာမှ ဝင်ပြီး သိမ်းမပေးတဲ့အကြောင်း၊ အိပ်ချင်ရင် အိပ်ခန်းထဲ ဝင်ခွေနေပြီး နေ့လည်စာ စားချိန်မှာတောင် အိပ်ပျော်နေတတ်တဲ့အကြောင်း။ ရှင့်အဖေကလည်း သူ့မိန်းမသဘောရှိ အလိုလိုက် အကြိုက်ဆောင်ပေးနေရကြောင်း၊ အမြဲပဲ အအေး သောက်အုံးမလားလို့ တမေးထဲ မေးတတ်ကြောင်း၊ ချမ်းတယ်ဆိုရင်လည်း သိုးမွေးအကျီ င်္ကို တယုတယ ဝတ်ပေးတတ်ကြောင်း အမေကပြောတတ်တယ ။
“သူကြောင့် အားလုံး ဒီက မပြောင်းနိုင်တာ … သူကတော့ နန်းတော်ကြီး တစ်ဆောင် ဆောက်မပေးမချင်း သဘောတော ကျနိုင်မယ် မထင်ဘူးတော်”
“ဒါကလည်း မလွယ်ဘူးလေ … အလုပ်သစ် အကိုင်သစ်နဲ့ ဘဝသစ် ပြန်စရတာ … သူကြည့်ရတာ ပြောင်းလာချင်ပုံ မရဘူး .. ဒါကြောင့်လည်း ယောက်ျားလုပ်သူက အရာရာ အဆင်ပြေအောင် ဂရုစိုက်ပေးနေရတာ နေမှာ”
“ရှင် ကျမအပေါ် ဒီလောက် အရေးတယူ မရှိပါဘူးတော်….”
“နေပါစေကွာ…” အဖေက အမေဆီကနေ တစ်ဖက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီး စောင်ကို မေးအထိဆွဲတင်ရင်း ပြောလိုက်တယ်။ “တစ်သက်လုံးတော့ မနေပါဘူးကွာ …. မကြာခင် သူတို့လည်း ပြောင်းသွားပြီး တို့လည်း အရင်အတိုင်း ပြန်နေကြရတော့မှာပါ”
ရှင့်တို့တတွေ ဒီမှာနေလို့ အနှောက်အယှက်မဖြစ်တာ ကျမတစ်ယောက်ပဲရှိမယ်။ ရှုပ်ထွေးပြီး သိမ်မွေ့ညင်သာတဲ့ ခံစားချက်တစ်မျိုးနဲ့ ရှင့်ကို ကျမ သဘောကျနေမိတယ်။ နောက်ရိုးသားတဲ့ ပျော်ရွှင်မှုမျိုးနဲ့ ရှင့်ကို တစ်ရက်ပြီး တစ်ရက် အကဲခက် လေ့လာနေခဲ့မိတယ်။ ရှင့်မိဘတွေကိုလည်း သဘောကျပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရှင့်အမေကိုပေါ့။ ရှင့်ဆီကမရခဲ့တဲ့ ဂရုပြုမှုကို သူ့ဆီကရခဲ့တယ်။ တစ်နေ့တော့ ရှင်တို့တတွေ ရောမမှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ရှင့်အဖေကူးလာတယ်။ ကျမကတော့ ဓာတ်ပုံတွေက ထောင့်စွန်းက တယုတယ ကိုင်ကြည့်ရင်း ကြည်နူးနေမိတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေ အားလုံးလိုလိုက ရှင်နဲ့ ရှင့်အမေပုံတွေချည်းပဲ။ ပီဇာစားရင်း ရိုက်ထားတဲ့ပုံ၊ နောက် ရေပန်းခုံတော်တွေမှာ ထိုင်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေရယ်။ အဲ တာဂျန်ကျောက်တိုင် နားမှာ ရိုက်ထားတဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပုံ နှစ်ပုံပါတယ်။
“သမီးစာတမ်းအတွက် တစ်ပုံယူလိုက်လေ” ရှင့်အဖေကကမ်းပေးရင်း ပြောတယ်.။
“ဟင်… သမီးမှ ပုံထဲမှာမပါဘဲ”
“ကိစ္စမရှိပါဘူးကွယ် …. ဦးလေး ရောမကို ရောက်တုန်း သမီးအတွက်ရိုက်ပေးလာတာလို့ ပြောလိုက်ပေါ့”
ဓာတ်ပုံထဲမှာ ရှင်ပါတယ်။ ကျောက်တိုင်တစ်ဖက်မှာ ရပ်လို့။ ခေါင်း အောက်ငုံ့ထားတော့ ဦးထုပ်ကြက်လျှာက ရှင့်မျက်နှာကို ကွယ်နေတယ်။ သည်ဓာတ်ပုံထဲကနေရာလေးကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ မရေမတွက်နိုင် ဖြတ်သန်းသွားခဲ့ကြဖူးမှပဲ။ အဲဒီထဲမှာ ရှင်လည်း တစ်ယောက် အပါအဝင်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကို ရှင် ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကလေးဟာ လျို့ဝှက် နက်နဲစွာ ကျမကို ဆွဲဆောင်နေပြီး တစ်နည်းအားဖြင့် အသိအမှတ် ပြုခံရတယ်ရယ်လို့ မျှော်လင့်နေမိတယ်။
“ဒါဆိုလည်း ကျတော်တို့ မနက်ဖြန် မနက်စာ လုပ်စားကြတာပေါ့” ရှင့် အမေလှီးထားတဲ့ ကိတ်မုန့်ကို ယူစားရင်း ရှင်ဝင်ပြောတယ်။ ရှင် မီးဖိုထဲကို ဝင်လေ့မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီညနေတော့ ရှင် စားရမယ့် အရေးကို တွေးမိဟန်နဲ့ မီးဖိုထဲမှာချည်းပဲ။
ညစာ စားပြီး ကျမတို့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ စုကြတော့ နှင်းတွေ ဆက်ကျမယ့်အကြောင်း သတင်းကို စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ နှင်းကျလို့ ကျမလည်း မနက်ဖြန် ကျောင်းပိတ်လောက်တယ်။ အဖေ့ အတန်းတွေလည်း လွှတ်ရလောက်တယ်လို့ တွေးရင်း စိတ်လှုပ်ရှားနေမိတယ်။ “ရှင်လည်း မနက်ဖြန် အလုပ်ဖျက်လိုက်လေ…” ရှင့် အမေက ရှင့် အဖေကို လှမ်းပြောတယ်။ သူကလည်း ချက်ချင်း သဘောတူတော့ အားလုံးက အံ့တွေသြလို့။
“အင်း ဒါတွေကြောင့် ကျုပ်တို့ ကမ်းဘရစ်က ပြောင်းသွားတဲ့ ဆောင်းရာသီကို သတိရသဗျာ …” ရှင့် အဖေက စပြောတယ်။ ရှင့် မိဘတွေကတော့ ဂျော်နီဝါကားကို နည်းနည်းစီ ငုံလို့ . .. အမေက ငြင်းပေမယ့် အဖေကတော့ ဒီညမှာ သူတို့နဲ့ရောလို့ နည်းနည်းသောက်ဖြစ်တယ်။ “ကျုပ်တို့အတွက် လုပ်တဲ့ နှုတ်ဆက်ပွဲလေးလေ … မှတ်မိသေးရဲ့လား ..”
“လွန်ခဲ့တဲ့ ခုနစ်နှစ်က ….ဟိုတုန်းကဘဝအခြေအနေမျိုးပေါ့လေ….” အမေကဝင်ပြောတယ်။ နောက် ဒ်ီတုန်းက ရှင်နဲ့ ကျမ ဘယ်လောက် ငယ်ကြသေးတဲ့အကြောင်း၊ သူတို့တတွေလည်း ဘယ်လောက် နုကြသေးတဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောကြတယ်။
“အင်း .. ဟင်း ဟုတ်ပါရဲ့နော် … တယ် ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ညနေလေးပါပဲ” ရှင့် အမေက တမ်းတဟန်နဲ့ ဝင်ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့အသံက အားလုံး တညီတည်း ခံစားနေကြရတဲ့ လွမ်းဆွတ် တသမှုကို လှောင်ပြောင်နေသလိုပဲ။ “အခုနဲ့တော့ အားလုံးမတူဘူးလေ……”
မနက်ကျတော့ ကျမတို့ အိမ်ရဲ့ ပြတင်းပေါက်တိုင်းမှာ ရေခဲလေးတွေ သီးနေပြီ။ မြေပြင်မှာလည်း နှင်းတွေဖွေးလို့။ မနေ့ညက ကျမတို့ တပင်တပန်း စောင့်ခဲ့ရတဲ့ ကြက်ဥမုန့်ပေါင်းကလည်း မနက်စာအတွက် လက်ဖက်ရည်၊ ပေါင်မုန့် မီးကင်နဲ့တွဲလို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီ။ မုန့်ကတော့ ကျမ ထင်သလောက်လည်း မကောင်းလှပါဘူး။ မနေ့ညက ကျမကိုယ်တိုင် ကူပြီး မီးဖိုပေါ်မှာ ဖုတ်ခဲ့တဲ့ မုန့်နှစ် ပူပူတွေဟာ ခုတော့ အေးစက်ပြီး အစိုတွေပြန်လို့။ ရှင်ကတော့ သိပ်ကို ကြိုက်တယ်ထင်ပါ့။ တစ်ပန်းကန်ပြီး တစ်ပန်းကန်စားနေလို့ နောက်ဆုံး ရှင့်အမေက ဗိုက်နာမယ်ဆိုပြီး သိမ်းလိုက်ရတယ်။
မနက်စာ စားပြီး အဖေတွေကတော့ ဂေါ်ပြားကိုယ်စီနဲ့လမ်းရှင်းဖို့ သွားကြတယ်။ လေငြိမ်သွားတော့မှ ကျမ အပြင်ထွက်ခွင့်ရတယ်။ အရင်ကတော့ ကျမ တစ်ယောက်ထည်း ရေခဲနဲ့ နှင်းလူ လုပ်တန်းကစားတယ်။ ဟန်ချက် မညီမညာနဲ့ ပိန်လှီနေတဲ့ နှင်းလူပေါ့။ ကျမက လိုတဲ့ မုန်လာဥတို့ ဘာတို့ တောင်းရင်လည်း အမေတို့က စားစရာကို ကစားရမလားဆိုပြီး ဆူတတ်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သည်တစ်ခါတော့ ရှင် ကျမနဲ့အတူတူ နှင်းလူလာလုပ်တယ်။ လက်ဗလာနဲ့ နှင်းတွေကို ထိရင်း လုပ်ထားတဲ့ အရုပ်ကိုကြည့်ရင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ရှင် ပျော်နေတာကို ကျမမြင်ရတာပဲ။ ရှင်က နှင်းတွေ တစ်ဆုတ်လောက်ကို လုံးရင်း ကျမဘက်ကိုပေါက်လိုက်တယ်။ ကျမလည်း မထိအောင် ခေါင်းငုံရှောင်ရင်း ရှင့်ကို ပြန်ပေါက်တယ်။ ရှင့်လည်မှာ လွယ်ထားတဲ့ ကင်မရာကို သတိထားမိရင်း နှင်းတွေဟာ ရှင့်ခြေထောက်ကို မှန်သွားတယ်။
“ကိုယ် အရှုံးပေးပါတယ် … ကွာ” ရှင်က လက်နှစ်ဘက်ကို အပေါ် မြှောက်ပြရင်း ပြောတယ်။ နှင်းလွင်ပြင်ကြီး အဖြစ် အသွင်ပြောင်း သွားတဲ့ ကျမတို့လမ်းကလေးကို ငေးကြည့်ရင်း “သိပ်လှတာပဲ” လို့ ရှင်က စကားဆက်တယ်။ ဒီ ရာသီဥတုကို ကျမ ဖန်တီးတာ မဟုတ်သည့်တိုင် ရှင့် စကားကြောင့် ကျမ သိပ်ကျေနပ်သွားတယ်။ ရှင်က အိမ့်နောက်ဖက် တောထဲကို ဆက်လျှောက်သွားတော့ ကျမမှာ ချီတုံချတုံ။ အဲဒီမှာ ကျမကို ပြစရာရှိတယ်လို့ပဲ ရှင်ကပြောထားတာ။
နှင်းတွေဖုံးနေတဲ့ ကောင်းကင်ပြာကြီးအောက်က အရွက်မဲ့ သစ်ကိုင်းတွေ၊ သစ်ပင်ကြီးတွေဟာ လျှို့ဝှက် ဖုံးကွယ်မှု မရှိတော့သလို အန္တရာယ် ကင်းနေသယောင် ထင်လာစေတယ်။ အဲဒ်ီတောထဲမှာ ပျောက်သွားပြီး နောက် ပြန်မတွေ့တော့တဲ့ ကောင်လေးအကြောင်းကိုလည်း ကျမ မတွေးမိတော့ဘူး။ ရှင်ကတော့ မကြာ၊ မကြာဆိုသလို ရပ်ရပ်ပြီး ကင်မရာနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ပေမယ့် ကျမကိုတော့ ရိုက်ပေးမယ်လို့ မပြောခဲ့ဘူးနော်။
ကျမတို့ အဝေးကြီး လျှောက်ကြတယ်။ နှင်းသက်သံတွေကို မကြားရတော့တဲ့ အထိ။ ကျမတို့ အိမ်ကို မမြင်ရတော့တဲ့ အထိ။ ရှင်က ဒူးထောက်လိုက်ပြီး နှင်းတွေကို ယက်ဖယ်နေတဲ့အထိ ဘာတွေ လုပ်နေတယ်ဆိုတာ ကျမ မသိခဲ့ဘူး။ အောက်မှာတော့ ကျောက်တစ်မျိုးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အပြားတစ်ပြား။ နောက်တော့ ဒါဟာ သင်္ချိုင်းဂူဆိုတာ ကျမ သိလိုက်ရတယ်။ ရှင်ကတော့ ဂူပေါ်က နှင်းတွေကို လိုက်ဖယ်နေတယ်။ ကျမလည်း မြုပ်နေတဲ့ ဂူတွေကိုပေါ်ဖို့ ရှင်နဲ့ ကူပြီး နှင်းတွေဖယ်ပေးတယ်။ ပထမတော့ လက်ဝါးလေးနဲ့ပဲ နောက်တော့မှ လက်မောင်းတစ်ခုလုံးနဲ့ သပ်ချပြီးဖယ်တယ်။ ဂူတွေက “ဆိုင်မွန်” မိသားစုပိုင် အုတ်ဂူတွေပဲ။ စုစုပေါင်း ခြောက်လုံး။
နောက် နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ ရှင်တို့ ပြောင်းသွားကြတယ်။ မဆက်ချူဆက်က နာမည်ကြီး ပိသုကာ ကိုယ်တိုင် ဒီဇိုင်းဆွဲထားတဲ့ မြောက်ဘက် ကမ်းခြေက အိမ်တစ်လုံးကို ရှင့် မိဘတွေ ဝယ်လိုက်တယ်လေ။ အိမ်ခေါင်းမိုးက အပြားလိုက်ရယ်၊ နောက် နံရံတွေက မှန်တွေချည်းပဲ။ အပေါ်ထပ် အခန်းတွေကို လသာဆောင်ထုတ်လို့ ရအောင် စီစဉ်ထားပြီး ဧည့်ခန်း မျက်နှာကျက်ကိုလည်း ပေ (၂၀)လောက် မြှင့်ထားတယ်။
ရေနား မနီးလှပေမယ့် ရှင့်အမေ သဘောကျ ရေကူးဖို့ ရေကန်လေးလည်းပါတယ်။ ရှင်တို့ ပထမဆုံးပြောင်းတဲ့ ညက အမေက ရှင့် အမေချက်ပြုတ် မနေရအောင်ဆိုပြီး ထမင်းဟင်း ချက်ပို့တယ်။ ကျမတို့ကတော့ အိမ်ကြီးရယ်၊ ပစ္စည်း ပစ္စယတွေရယ်ကို သဘောကျနေမိတယ်။ အခန်းလွတ်တွေဟာ မကြာခင် ရောက်လာတော့မယ့် ရောဂါ ဝေဒနာ ခံစားရမှုတွေ၊ ပြင်းပြတဲ့ ကြေကွဲမှုတွေကို တန်ပြန် မြင်ယောင်မိစေသလိုပဲ။ အတွင်းဘက် အလင်းရောင် ကောင်းကောင်း ဝင်တဲ့ အိပ်ခန်းဟာ သူ့ အိပ်ယာပဲလို့ ရှင့် အမေကပြောတယ်။ ဒါဟာ နှစ်နှစ်လောက် သူ့ကို လူ့ဘဝ သုခတွေ ပေးနိုင်မယ့် နေရာလေ။
နောက်ဆုံးတော့ ကျမ မိဘတွေလည်း သတင်းကြားပြီး ရှင့်အမေ တတ်တဲ့ ဆေးရုံကို အပြေးသွားကြတယ်။ ရှင် ကျမကို အကြောင်းစုံ ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်း ဘယ်တုန်းကမှ စကား မဟခဲ့ပါဘူး။ ဒီကိစ္စမှာ ကျမ သစ္စာရှိပါတယ်။ ကျမတို့ မိဘတွေဟာ သိပ် ရင်းနှီးသွားကြပြန်ဟန်နဲ့ အပတ်စဉ် သူက လာလိုက်၊ ကိုယ်က သွားလိုက်နဲ့ အတင်းကာရော ရင်းနှီးစကားတွေ ဆိုကြပြန်တယ်။ ရှင့်အမေကတောင် လာမယ့် နွေရာသီမှာ ကျမတို့ကို ရေကူး ဖိတ်မယ်လို့ ကတိတွေ ပေးသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်တွေ ခန့်မှန်းထာထက်တောင် သူ့ ကျန်းမာရေးက ပိုပြီးဆိုးလာတယ်။ ရှင်တို့ကတော့ သူ့ရောဂါအကြောင်း စကားကိုမဟဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံ အများပျော်အောင်ဆို ဖျော်ဖြေတောင်နေကြသေး။ တစ်ခါတော့ အဖေနဲ့အမေတို့က သူတို့ကိုတောင် ဖွင့်မပြောကြလို့ အစော်ကားခံရသလို ခံရခက်ကြောင်း ပြောကြသေးတယ်။ “နောက်ဆုံးတော့ တို့ပဲ အစစအရာရာ လုပ်ပေးကြရတာကိုများ …..” တော်တော်နဲ့ အိပ်ပျော်ကြဟန် မတူဘဲ သူတို့ ပြောနေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမကတော့ နံရံ တစ်ဖက်ခြားနေတဲ့ ရှင် အရင်အိပ်ခဲ့တဲ့ ကျမ ကိုယ်ပိုင်အခန်းကို ပြန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ သူတို့ပြောတာတွေကို သိပ်မကြားရတော့ပါဘူး။ ။
(၉:၄၇ am ၊ ၂၈-၆-၂၀၀၉)